काठमाडौँ, २७ साउन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रुपमा चर्चा शुरु भएको दशक बढी भयो । अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय नै भयो । आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन । रणनीतिक महत्व बोकेको आयोजना : सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना काठमाडौँ, पोखरा,..
पाल्पा, २६ साउन । कालीगण्डकी करिडोर कार्यालय पाल्पाबाट रु एक अर्ब ५० करोड ७१ लाख खर्च हुनुपर्ने थियो । गत आव २०७५-७६मा रु एक अर्ब २२ करोड २९ लाख मात्र खर्च भयो । पूँजीगततर्फ रु २८ करोड ४२ लाख खर्च हुन सकेन । गत आवमा ठूलो मात्रा खर्च गर्न नसक्ने कार्यालयमा सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको नाम समावेश छ । रु ३८ करोड..
इलाममा सीमा छुट्याउने दशगजा स्पष्ट नहुँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न समस्या
पशुपतिनगर, २३ साउन इलाममा नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने दशगजा स्पष्ट नहुँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न समस्या भएको छ । पशुपतिनगर सीमा प्रशासन कार्यालयमा सीमा स्पष्ट पार्ने नक्सा र प्राविधिक टोली नभएकाले जनप्रतिनिधिले गृह मन्त्रालय र नापी विभागसँग तत्काल समाधानको पहलका लागि माग गरेका छन् । सन्दकपुर गाउँपालिका– २ र ४ स्थित सन्दकपुरमा प्रदेश सरकारले निर्माण शुरु गरेको भ्युटावर बीचमै रोकिएको छ । नेपाल–भारत..
१ करोडसम्मका सडक निर्माण आयोजनामा डोजर नचाउन सरकारकाे निर्देशन
काठमाडौं, २३ साउन । १ करोडसम्म बजेट भएका तथा साे भन्दा साना सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनामा डोजरकाे प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै १ करोड रुपैयाँसम्मका योजनामा डोजरको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएकाे हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगार प्रत्याभूत गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जारी निर्देशिकाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले १ करोडसम्मका आयोजनामा सम्भव..
रुपन्देही, २३ साउन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले लुम्बिनीको विकास र गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणको कामलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गौतमबुद्ध विमानस्थल आज निरीक्षण गर्दै उहाँले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विमानस्थल निर्माण र लुम्बिनीको विकासमा विशेष चासो दिनुभएकाले तीनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउनुभयो । आगामी डिसेम्बर महीनाभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय गौतमबुद्ध विमानस्थल..
मार्तडी जोड्ने खारगडा खोलामा पुल नहुँदा आवतजावतमा समस्या
बाजुरा, २२ साउन जिल्लाको बडीमालिका नगरपालिका–९ र ३ को सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने खारगडा खोलामा पुल नहुँदा रजालीका तरकारी किसानलाई मार्तडी आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ । खोलामा पानीको बहाब बढेपछि आवातजावतमा समस्या हुने गरेको हो । खोलामा पुल नहुँदा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु परेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । नगरपालिकाले पुल निर्माणका लागि पहल गरेको बताए पनि काममा ढिलाइ हुँदा यो बर्खा..
१ सय २१ तुइन विस्थापन, मानवीय क्षतिमा कमी
काठमाडौँ, २२ साउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा १३४ मध्ये १२१ तुइन विस्थापन गरेको छ । सरकारको तुइन विस्थापन गर्ने योजनाअनुसार ती तुइन विस्थापन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं १ मा पाँच, प्रदेश नं ३ मा १९, गण्डकी प्रदेशमा २६, प्रदेश नं ५ मा १७, कर्णाली प्रदेशमा २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ वटा..
काठमाडौं, २२ साउन । दुई दशक बितिसक्दा पनि धोबीखोला करिडोरको निर्माण सम्पन्न हुन सकेकाे छैन । करिडोर योजना बनेको २० वर्ष पुरा भइसक्दा पनि चाबहिलभन्दा माथिको करिडोर क्षेत्रका स्थानीय धुलो र हिलोको चपेटामा छन् । सवारी गुडाउन नमिल्ने अवस्थाको यो निर्माणधीन सडकमा बनेका खाल्टाले दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिडोर निर्माण नसकिने उपत्यका विकास प्राधिकरण बताउँछ । यो करिडोरको करिब..
काठमाडौं, २१ साउन । भूकम्पले ध्वस्त पारेको काठमाडौंको धरहराको पुर्ननिर्माण गरिरहेको रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा परेसँगै रमणलाई नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हुलाकी सडक निर्माणमा बदमासी गरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गरी रमण कन्स्ट्रक्सन र..
४ लाख २४ हजार घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न
काठमाडौँ, १९ साउन विस २०७२ वैशाख १२ गते र त्यसपछिका परकम्पबाट प्रभावित चार लाख २४ हजार ९७७ लाभग्राहीले अनुदान लिई घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । थप दुई लाख १४ हजार ३१४ लाभग्राहीका घर पुनःनिर्माण भइरहेका राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनःनिर्माण सम्पन्न र बनाउँदै गरेका सहित कुल छ लाख ४४ हजार २९१ घर पुनःनिर्माणको प्रक्रियामा रहेका प्राधिकरणले जनाएको छ ।..
सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनको स्वागत
काठमाडौँ, १९ साउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरीद (आठौँ संशोधन) नियमावली २०७६ को स्वागत गरेको छ । महासङ्घले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संशोधनले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही प्रमुख माग सम्बोधन भएका भन्दै नियमावलीको स्वागत गरेको हो । विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा एक पटकका लागि म्याद थपको प्रस्ट प्रावधान उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष..
काठमाडौँ, १९ साउन । तोकिएको समयमा काम नहुने रोगबाट व्याप्त छ नेपाल । साना, मझौला तथा ठूला आयोजना त्यसैको मारमा परेका छन् । निर्माण व्यवसायीको अनेकन बहाना, स्थानीयवासीको अवरोध तथा अन्य प्राविधिक र प्रशासनिक झन्झटका कारण पनि परियोजनामा ढिलाइ हुँदै आएको छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य कारण पनि आयोजनाको ढिलाइका कारण बन्दै आएका छन् । त्यस्ता कारणले गर्दा सरकारको अपेक्षासमेत पूरा..
काठमाडौँ, १९ साउन । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको २२ प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन अरुण तेस्रो जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ । सोही कम्पनीका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान..
काठमाडौँ, १५ साउन चारवर्ष अघिको भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका सरकारी र सार्वजनिक भवनमध्ये ७० वटाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । सरकारी स्रोतबाट ३० र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा बनेका ४० भवन निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारी स्रोतबाट पुनःनिर्माण भइरहेका बाँकी २१ भवन चालु..
काठमाडाैं, १५ साउन । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणले दोस्रो चरणको कार्य अघि बढाउने भएकाे छ । राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको लागि आयोजना तथा चाइनिज कम्पनीबीच सम्झाैता भएकाे छ । चाइनिज गुवाङडुवाङ्ग युएनटिएन इन्जिनियरि कंपनी– रमण जे.भी बिच सम्झौता भएको हाे । प्राविधिक परिक्षणमा ५ वटा निर्माण कम्पनी छनौटमा परेपछि खोलिएको आर्थीक प्रस्तावनामा समेतमा ५ बटै निर्माण कम्पनी छनौट भए..
जनतालाई सास्ती, जति म्याद थपे पनि बन्दैनन् सडक
काठमाडौँ, १५ साउन । लगनखेलबाट सातदोबाटोसम्मको दूरी ०.८ किलोमिटर छ। अर्थात् एक किलोमिटर पनि छैन। त्यही टुक्रे खण्डको सडक विस्तार गर्न २०७३ जेठ २६ गते ठेक्का लगाइयो। म्याद दिइयो १६ महिना (३०७४ असोज २७ सम्म)। म्याद सकिँदा कामको मेलै सरेन। फेरि म्याद थपियो। सरकारकै आँकलनअनुसार ३ वर्ष २ महिनामा बल्ल त्यहाँ ५० प्रतिशत काम सकिएको छ। सरकार ठेक्का लगाउँछ। ठेकेदार समयमा काम..
अन्ततः १० वर्षमा सम्पन्न भयो काबेली कोरिडोर
फिदिम, १४ साउन एक दशक अघिबाट निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको काबेली कोरिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रशारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । आयोजना प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीका अनुसार दुई दिनअघि आयोजनाको तेश्रो तथा अन्तिम खण्ड निर्माणको सम्पूर्ण कार्य पूरा भएको हो । तेश्रो खण्डको निर्माण पूरा भएसँगै प्रसारण लाइन परीक्षणको तयारी शुरु भएको छ । उहाँका अनुसार अन्तिम खण्डको प्रसारण लाइनमा..
गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा जर्मनीको चासो, मन्त्रालय र प्राधिकरण सकारात्मक
काठमाडौँ, १४ साउन । रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनीको म्युनिख इन्टरनेश्नल एयरपोर्टले चासो देखाएको छ । विमानस्थल सञ्चालनको इच्छा जनाउँदै जर्मनीको म्युनिख एयरपोर्टले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई पत्र पठाएको हो । जर्मन सरकारको स्वामित्वको उक्त कम्पनीले विमानस्थल सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई औपचारिक पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ..
काठमाडौँ, १४ साउन चिनियाँ प्रविधिबाट इँटा उत्पादन गर्न काभ्रेको बसडोलमा नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आउने भएको छ। जमिनको लागत र वर्किङ क्यापिटलबाहेक नै ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुने यो उद्योग सय रोपनीमा निर्माणाधीन रहेको प्रवद्र्धकमध्ये एक ईन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले जानकारी दिए। उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ५० हजार गोटा तथा वार्षिक एक करोड ५० लाख इँटा हुने बताइएको छ। इँटा उत्पादनका लागि फ्याक्ट्री सेटअप लगायत..
काठमाडौँ, १३ साउन । चीन सरकारले विस्तार सम्पन्न गरेको कलंकी–कोटेश्वर खण्डको विभिन्न भागमा सडक विभागले आकाशे पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ । यात्रुको सहजताका लागि विभागले बालकुमारी, सातदोवाटो, महालक्ष्मीस्थान, एकान्तकुना, सानेपा र बल्खुमा गरी ६ स्थानमा आकाशे पुल बनाइरहेको समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ । चीन सरकारले यस सडकमा कोटेश्वर र धोबीघाटमा गरी दुई स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गरेको थियो । विभागले दुई वर्षअघि..
चितवन, १२ साउन पन्ध्र महीनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको यहाँको बाइपास सडक ३० महीनामासम्म बनेको छैन । अढाइ किलोमिटर लामो उक्त सडकको हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । भरतपुरको आँपटारीबाट केन्द्रीय बस टर्मिनलसम्मको उक्त सडक क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासनसहित अधिकांश सरकारी कार्यालय छन् । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका इञ्जिनीयर गीताञ्जली कोइरालाका अनुसार २०७३ को पुस २५ गते गौरीपार्वती..
सडक कालोपत्रे: देउवाभन्दा ओलीको ११ किलोमिटर बढी
काठमाडौँ, १२ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संघीय सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भन्दा ११ किलोमिटर धेरै सडक कालोपत्रे गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैजसो भाषणमा गत वर्ष सरकारले धेरै सडक कालोपत्रे गरेको भन्दै आए पनि त्यो पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको भन्दा ११ किलोमिटर मात्र बढी हो। सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को (आठ महिना देउवाको सरकार) तुलनामा गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा..
कसरी बन्छ देश ? काम नगर्ने ठेकेदारलाई ‘प्रोत्साहन’
काठमाडौँ, ११ साउन । प्रदेश ५ सरकारले समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो म्याद थपिदिएर ‘प्रोत्साहन’ दिएको छ। असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रदेश मातहतका थुप्रै योजना सम्पन्न नभए पनि असार २६ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट म्याद थपको बाटो खोलिदिएको हो। बैठकले एकातिर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने र अर्कोतिर म्याद थप गरेर काम अघि बढाउने दोहोरो निर्णय गरेको छ। निर्णयको बुँदा नम्बर एकमा..
रङ्गशाला निर्माणका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा सहयोग
चितवन, ९ साउन धुर्मुश सुन्तली फाउण्डेसनको अगुवाइमा यहाँ निर्माण हुन लागेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन शाखाले रु ५५ लाख ५५ हजार ५५५ को चेक हस्तान्तरण गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेललाई आज सो मूल्य बराबरको चेक प्रदान गर्दै सहयोग रकम बढाएर रु एक करोड पु¥याउने जानकारी दिनुभयो । यसअघि नै सङ्घले रङ्गशालाका..
बनेपा, ९ साउन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामा रहेका सात हजार भूकम्प लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको छ । भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत लाभग्राहीको सूचीमा परेर सम्झौता गर्न नआएका कारण त्यस्ता लाभग्राहीलाई सूचीबाट नै हटाउने तयारी गरिएको हो । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा त्यसरी लाभग्राहीको सूचीमा परेर सम्झौता गर्न नआउनेको सङ्ख्या सात..
रामपुर, ८ साउन पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नं ५ झ्याक्सेमा पुल निर्माण गरिएको छ । वर्षात्मा खोला बढेर वारपार गर्न समस्या भएर हैरान परेका स्थानीयवासी पुल निर्माणपछि खुशी भएका छन् । तिनाउ गाउँपालिका, इन्द्रेणी समाज केन्द्र र सेवक नेपाललगायतका सङ्घसंस्थाको सहयोगमा सो पुल निर्माण गरिएको हो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सरस्वती दिसुवाले रु २९ लाख पाँच हजारमा ३५ मिटर लामो सो ट्रस..
काठमाडौँ, ६ साउन । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाप्रति सरकारको जति चासो छ, त्योभन्दा बढी आम नागरिकको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करीब छ लाख सञ्चयकर्तामध्ये तीन लाखले आयोजनाको साधारण शेयर खरीद गरेका छन् । ४५६ मेगावाट : यस्तै तीन लाख बढी नागरिकले सर्वसाधारणको हैसियतमा आयोजनाको साधारण शेयर खरीद गरी लगानी गरेका छन् । आयोजना कहिले सकिएला र बिजुली बल्ला भन्ने..
काठमाडौँ, ५ साउन । बिजुलीबजारस्थित धोबीखोलामा निर्माणाधीन ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालमा पहिलोपटक ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ प्रविधिबाट निर्माण भएको पुल आगामी तीन चार महीनामा सम्पन्न हुने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । पछिल्लो समय विश्वभर रुचाउन थालिएको यो प्रविधिको पुल बलियो मात्रै नभएर सौन्दर्य प्रवद्र्धनको पक्षले पनि उत्कृष्ट मानिएको आयोजनाले जनाएको छ ।..
कञ्चनपुर, ५ साउन संरक्षित जनावरलाई पानीको व्यवस्था गर्न कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा रहेको सिंहपुर सामुदायिक वनमा दुई कृत्रिमताल निर्माण गरिएका छन् । संरक्षित जनावरलाई पानी खुवाउन सहजता प्रदान गर्न सामुदायिक वनको भित्री र बाह्य क्षेत्रमा गरी दुई ताल निर्माण गरिएका हुन् । दुईवटै पोखरी निर्माण गर्नका लागि सामुदायिक वन र लालझाडी मोहना संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत रु आठ लाख ५० हजार लगानी गरिएको छ ।..
काठमाडौँं, ४ साउन रुद्रमती सफाइको २७६औँ हप्तामा रातोपुल र कालोपुलको बीच भागमा बनेको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गरिएको छ । प्रदेश नं ३ सरकारको रु २७ लाख २८ हजार आर्थिक सहयोगमा पुल निर्माण भएको हो । यहाँ पुल नहुँदा पैदलयात्रु रातोपुल अथवा कालोपुलसम्म घुमेर वारपार गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । पुल निर्माणपछि बिहान–बेलुका हिँड्न चाहने र पैदलयात्रा गर्ने यात्रुलाई सुविधा पुग्ने भएको छ..
Results 920: You are at page7of 31